8 युरोपको लागि तपाईंले यात्रा गर्नु पर्ने चीजहरू – Vocre
8 युरोपको लागि तपाईंले यात्रा गर्नु पर्ने चीजहरू: A Traveler's Guide
युरोप यात्रा को योजना बनाउँदै? उडान र होटल बुकिंग प्रक्रियाको एक हिस्सा मात्र हो. The most important – and arguably the trickiest – part is packing. जबकि प्रकाश प्याक गर्न यो उत्तम हुन्छ, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईं बिना घर छोड्न सक्नुहुन्न.
1. आवश्यक यात्रा कागजातहरू
युरोप यात्रा गर्न, तपाईंलाई तपाईंको सबै आवश्यक कागजातहरू आवश्यक पर्दछ, जस्तै:
तपाईंको राहदानी वा भिसा
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग अनुमति (यदि तपाईं कार भाँडामा लिने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने)
कार भाडा पुष्टि
तपाईको कागजातहरूको ब्याकअप प्रतिलिपिहरू राख्न यो राम्रो विचार हो (डिजिटल वा शारीरिक) केवल मामला मा तपाईं मूल हराउन. यदि तपाईं शारीरिक ब्याकअप प्रतिलिपिहरू हराउने बारेमा चिन्ता गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो कागजातहरू स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई आफुलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ कहिँ पनि सजिलो पहुँचको लागि, कुनै पनि समय.
2. अनुवाद अनुप्रयोग
यद्यपि अंग्रेजी यूरोपभरि धेरै प्रमुख शहरहरूमा व्यापक रूपमा बोलिन्छ, स्थानीयसँग कुरा गर्न वा पिटिएको मार्गबाट ​​टाढाका स्थानहरूमा यात्रा गर्दा यो अनुवाद अनुप्रयोगको हातमा हुनु सहयोगी हुन्छ.
Vocre (को लागी उपलब्ध आईफोनहरू र एन्ड्रोइड उपकरणहरू) व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सजिलो बनाउँदछ जसले तपाईंको मातृभाषा बोल्दैन. केवल तपाईंको स्मार्टफोनमा बोल्नुहोस्, र भोक्रे तुरून्त तपाईको छनौट गरिएको भाषामा अनुवाद हुनेछ (बाट छान्नुहोस् 59 बिभिन्न भाषाहरु).
हातमा Vocre जस्तै एक अनुप्रयोग संग, तपाईंले अ areas्ग्रेजी स्पिकरहरू नहुन सक्ने ठाउँमा यात्रा गर्दा डराउनु पर्दैन. यसले तपाईंलाई स्थानीयसँग सार्थक कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ स्थानीय संस्कृतिमा आफैलाई डुबाउनका लागि. दिनको अन्त्यमा, यही यात्राको बारेमा हो, यो होइन? नयाँ व्यक्तिसँग भेट गर्दै र उनीहरूको जीवनका अनुभवहरूको बारेमा सिक्दै. Vocre ले तपाईंलाई त्यसो गर्न मद्दत गर्दछ.
क्रेडिट कार्ड सामान्यतया यूरोप भरि स्वीकार गरिन्छ, विशेष गरी सहरहरूमा. यद्यपि, तपाईंलाई कहिले थाहा हुँदैन कहाँ र कहिले तपाईंलाई नगदी चाहिन्छ, त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग केही समयहरू छन्.
नगद प्राप्त गर्नका लागि सजिलो तरिका एटीएम प्रयोग गर्नु भनेको तपाईं विदेशमा हुँदा. प्रत्येक केही दिनमा आवश्यक अनुसार पैसा निकाल्नुहोस्. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं अझै पनि तपाईंको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईं लाग्न सक्ने कुनै पनि मुद्रा विनिमय शुल्क वा विदेशी लेनदेन शुल्कहरू प्रति सजग रहनुहोस्.
तपाईंको यात्राको बखत कुनै समय, तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन रिचार्ज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. यदि तपाईं युरोप बाहिर देशबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई एउटा ट्राभल प्लग एडाप्टर चाहिन्छ.
सबै इन-वन एडेप्टर एक उत्तम विकल्प हो (बिभिन्न युरोपेली देशहरूले बिभिन्न प्लग प्रयोग गर्दछन्), र ती मध्ये धेरैसँग USB चार्जहरू पनि छन् फोन चार्जिंग अझ सजिलो बनाउनको लागि.
यदि तपाईंलाई प्लग इन गर्न आवश्यक छ भने कुनै युरोपमा यात्रा गर्दा उपकरणहरू, तपाईंको प्लग एडेप्टर बिना घर नछोड्नुहोस्. अमेजनसँग धेरै उत्कृष्ट छ यात्रा एडाप्टर किट.
5. आरामदायी पैदल जुत्ता
यदि तपाई वास्तवमै युरोप अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईले गर्नु पर्छ धेरै हिड्दै. लगभग सबै यूरोपीय शहरहरू हिँड्न योग्य छन्. तपाईं आफ्ना धेरै जसो दिनहरू कठिन सडकमा र cobblestones मा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक जोडी प्याक गर्नुहोस् (वा दुई) आरामदायी हिंड्ने जुत्ताहरूको.
स्लिप-मा स्नीकर दर्शनीय स्थलहरूको लागि उत्कृष्ट हो. यदि मौसम सहि छ, चप्पल तपाइँको खुट्टा आराम र चिसो राख्छ. घरमा तपाईंको एथलेटिक जुत्ता छोड्नुहोस् (जब सम्म तपाईं पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ) र एक आधारभूत आरामदायक स्नीकरमा लाग्नुहोस्.
6. अन्तर्राष्ट्रिय फोन योजना
युरोप हुँदै यात्रा गर्दा, तपाईं अझै सम्पर्कमा रहन चाहानुहुन्छ. यो प्रश्न सोध्नको लागि होटेलमा कल गर्ने हो वा प्रियजनलाई घर फर्कनुहोस्, तपाईको विदेशमा हुँदा सेल सेवा हुनु अविश्वसनीय सुविधाजनक हुन सक्छ (र आवश्यक छ).
यदि तपाईंको फोन विदेशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईं टाढा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोन योजना प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्.
धेरै मुख्य वाहकहरूको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वा यात्रा योजनाहरू हुन्छन् जुन तपाईंलाई फीस र्याक नगरी जडित रहन अनुमति दिनेछ. यदि यी मध्ये कुनै एकमा स्विच गर्ने विकल्प छैन, तपाईं सन्देश पठाउन वा सम्पर्कमा रहन टाढा हुँदा Wi-Fi मा भारी भरपर्नको आशा गर्नुहोस्.
7. फिल्टर बोतल बोतल
प्राय: यूरोपियन गन्तव्यहरूमा उत्कृष्ट पानी छ जुन पिउन पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, तर यदि तपाइँ बरु यसलाई सुरक्षित खेल्नुहुन्छ, एक फिल्टरिंग पानी को बोतल एक उत्तम विकल्प हो. फिल्टरि water पानीको बोतल प्याक गर्नाले तपाईंलाई प्लास्टिकको पानीको बोतलबाट जोगिन मद्दत गर्दछ र पक्का गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सफा पिउने पानी हातमा छ.
धेरै फिल्टरिंग पानी को बोतलहरु हटाउनेछ E. कोलाई, साल्मोनेला र अन्य अशुद्धता जसले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ. जे होस् तपाईले धाराको पानी पिउन चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईंको पानीको बोतल वरिपरि लैजान यो सुविधाजनक र उपयोगी छ. धेरै युरोपेली शहरहरूमा पिउने फountain्गाराहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो बोतल पुन: भर्न सक्नुहुनेछ र प्रक्रियामा केही पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँ छ ब्रिटा फिल्टरिंग पानीको बोतल तपाईं लक्ष्य मा पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ.
8. सहयोगी अनुप्रयोगहरू
आफ्नो युरोपेली साहसिक कार्यमा जानु भन्दा पहिले, तपाईंलाई आवश्यक हुन सक्ने कुनै पनि उपयोगी अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न समय लिनुहोस्, जस्तै:
अनुवादक अनुप्रयोगहरू (Vocre जस्तै)
यातायात तालिका अनुप्रयोगहरू
तपाईं सक्छ एक पटक तपाईं आइपुग्दा यी डाउनलोड गर्नुहोस्, तर अगाडि यात्राको उत्साहमा सबै, तपाइँले पछि बिर्सिएको केहि बिर्सनु सक्नुहुन्छ. यदि तपाईंसँग पहिले नै सबै अनुप्रयोगहरू छन् तपाईंको यात्राको बेला तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ, तपाईं आफ्नो यात्रा रमाइलो गर्न बढी समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ र पर्दामा ग्लाइड कम समय.
यी केवल आठ आवश्यकताहरू छन् जुन तपाईले युरोपको यात्रामा लिन चाहानुहुन्छ. अवश्य, मूल कुरा - आरामदायक लुगा, शौचालय, आदि. - तपाईंको सूचीमा हुनुपर्छ. तर यसलाई बढ्तै नखोज्नुहोस्. तपाईसँग थोरै सामान छ, यत्र सजिलै घुम्न र यूरोपले प्रस्ताव गरेको सबै चीजहरूको आनन्द लिन सकिन्छ.